ကုလားကာ နောက်ကွယ်သို့ ဝင်ရောက်တော့မည့် … | Freedom News Group
ကုလားကာ နောက်ကွယ်သို့ ဝင်ရောက်တော့မည့် …
by FNG on February 8, 2011	မောင်မိုးညို၊ ၊ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ထုတ် စစ် အစိုးရသတင်းစာရှေ့မျက်နှာဖုံးတွေမှာ သမ္မတ နဲ့
ဒုတိယသမ္မတများ အဖြစ်အရွေးချယ်ခံကြသူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအပေါ်ထိပ်ဆုံးကနေ စစ်ဝတ်စစ်စားခန့် ငြား
ထည်ဝါစွာ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်စီးက ဖေါ်ပြထားတာကိုမြင်ရတော့ တယ်ပြီးလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးပါလား လို့ မောင်မိုးညိုနဲ့တကွ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာ
တိုင်းရင်းသားတို့က ဥဒါန်းကြူးရင့်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပါတ်သက်လို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြိးမတိုင်ခင်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဟစ်တလာအာဏာအထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်မှာ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုကိုသတိရမိပါတယ်။ အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီး(၂)ယောက်ကတနေ့ အိမ်ဒေါင့်တခုမှာထိုင်ရင်း အိမ်နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားထဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးဟစ်တလာရဲ့ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စပြစ်ပြီးပြုံးကြတယ်ဆိုသတဲ့။ အဲါဒီအချိန်က ရုပ်ရှင်လောကမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့လူရွှင်တော် Charlie Chaplin နဲ့အတော်တူဆိုဘဲ။ ဒါကိုမြင်တော့အိမ်တနေရာကထိုင်နေတဲ့ ဟစ်တလာလူငယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြေးဖြစ်သူက မြင်သွားလို့ နာမယ်ကြီးSS လျှိ့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကိုသွာတိုင်လိုက်ပါတယ်။ အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီးကို စစ်စုံထောက်တွေကဖမ်းပြီးနှိပ်စက်ကြလို့အတော်ခံလိုက်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခုလဲတပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ အရှိန်အ၀ါကို နိုင်ငံဥသြောင်တွေကတောင်မကျော်လွန်နိုင်ကြပါကလား။ ခုလဲသမ္မတလို့သာဆိုကြတယ်၊ တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကမလွတ်နိုင်ကြသေးပါလားလို့။
ဗိုလ်နေ၀င်း (၁၉၈၈) ရာထူးကထွက်ပြီးချိန်မှာ နိုင်ငံရေးလောကကို သူလုံးဝကျောခိုင်းလိုက်ပါပြီ လို့ကြေငြာသွာပြီးတဲ့တိုင်အောင်၊ နောက်တက်တဲ့ ဗိုလ်စောမောင် ရဲ့ “န၀တ” အဖွဲ့ဟာ ဗိုလ်နေ၀င်း ဆီသွားအမိန့်ခံသေးတဲ့ ကောဠာဟလတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်မှန်မမှန်တော့မသိရဘာဘူး။ ဗိုလ်နေ၀င်းကနေသတင်းစာတိုက်တွေကိုအကြောင်းကြားပြီး သူ့ဓါတ်ပုံတွေကိုရုံဌာနတွေအိမ်တွေမှာ ချိတ်ဆွဲခြင်းမပြုကြဘို့ပြောမှ၊ ဗိုလ်စောမောင်အဖွဲ့သဘောပေါက်ပုံရပါတယ်။ အဲ့ဒီကတည်းက ထင်ရာစိုင်းကြတော့တာပါဘဲ။ ဗိုလ်နေ၀င်းအနားယူစဉ်က သူဟာနိုင်ငံရေးသြဇာကြီးရုံမကပါဘူး။ သမိုင်းအစဉ်အလာလဲကြီးခဲ့တဲ့သူဆိုတာမမေ့ကြဘို့လိုပါတယ်။ သူ့ကြောင့်တိုင်းပြည်က ကမ္ဘာ့အမွဲဆုံးစာရင်းဝင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့၊ သူ့ဟာအစဉ်အလာကြီးခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်တယောက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအာဏာရှိဘ၀ကဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းရာထူးကြီးငယ်ဘ၀ကဘဲဖြစ်ဖြစ် အနားယူတဲ့လူတွေဟာ၊ သူတို့ရဲ့ အရေးပါအရာရောက်မှုတွေဟာ အနားယူပြီးနောက်တနေ့မှာဘဲ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်လေ့ရှိတာ ဓမ္မတာပါ။ တချို့ဆိုရင်ကိုယ်အနားယူတဲ့ဘ၀မှာတောင် အချိမ်းခြောက်ခံရတဲ့သာဓကတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အနားယူပြီးတာနဲ့ ဘ၀ပျက်ကြရပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီးဗိုလ်သန်းရွှေဟာ သူ့နိုင်ငံရေးသြဇာဆက်လက် တည်နေဘို့လိုတယ် ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီး၇ိပ်စားမိမှာပါ။ ဒီအတွက်သူနောက်အဆုတ်မှာ သူ့ကိုတသက်တာအကာအကွယ်ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်နိုင်မဲ့သူတွေ လိုပါတယ်။ ခုတက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးဟာ သူနဲ့ contemporary တွေမဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့တန်းတူရှီခဲ့တာက ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးဘဲရှိပါတယ်။ သူရေ၇ွှမန်းဟာလည်း (၈၈) အာဏာသိမ်းချိန်မှာ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်သာရှိသေးတာမို့ ကျန်ဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုရင် တပ်အစဉ်အလာကို ပိုလို့တောင်သိဘို့ခက်နေပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်မှာစစ်ရေးအာဏာရှိတဲ့ရာထူးကြီးတွေကို (၂)နှစ်စီလောက်ဘဲထားတာကိုကြည့်ပါ။ လက်ရှိတိုင်းတပ်မမှူးတွေဟာစစ်ကျောင်းသား ဘ၀ဘဲရှိကြပါအုံးမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်လောက်ကစပြီးတပ်မတေိာသည်အမြဲနုပျိုနေရမည်ဆိုပြီး၊ အသက်(၅၀) ပြည်လို့မှ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်မရှိကြသူတွေတပ်ကနေအရပ်ဘက်ပြောင်းကြရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကစစ်လုပ်သက်နဲလေ၊ သူ့အတွင်လုံခြုံစိတ်ချရလေပါဘဲ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ အကွက်စိလှတဲ့ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ ပရိယာယ်တွေပါဘဲ။
ဒုတိသမ္မတရာထူး(၃)နေရာအနက် စစ်တပ်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ နေရာကိုအနားကပ်မှ၊ ယူနီဖေါင်းချွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်တင်အောင်မြင့်ဦးကိုတင်ပေးလိုက်ပုံရပါတယ်။ လွှတ်တော်တွေမကျင်းပမှီ ၇က်ပိုင်းအထိ သူဘဲဆက်ပြီးလုပ်မလိုလိုကောဠာဟလတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုကြည့်ပါ။ တပ်ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကိုလည်း ဗိုလ်ကြီး/ဗိုလ်မှူးအဆင့်တွေကိုသာပေးတာကြည့်ပါ။ နိုင်ငံထူထောင်ရေး၊ နိုင်ငံအရေးအရာစီမံခန့်ခွဲရေးမှာ အတွေ့အကြုံရှိသူတွေ၊ ပညာတတ်တွေသာ နေရာယူသင့်ပါတယ်။ ဒီဗိုလ်ကြီးအဆင့်တွေက ဘယ်လိုအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာ တာဝန်ယူနိုင်ကြမှာလဲ။ အမိန့်စနစ်နဲ့ တသက်လုံးလုပ်လာကြသူတွေ (လွှတ်တော်ရဲ့ ၂၅%) ကနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှီတဲ့ အစီအစဉ်တွေထွက်လာနိုင်မှာလဲ။
အခြေခံဥပဒေမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲံအထက်မှာရှိလို့ လက်ရှိ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်အောင်မြင့် ဟာ သူရရွှေမန်းရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ ဒါဟာလည်းဗိုလ်သန်းေ၇ွှရဲ့အကွက်ကျကျစီမံခဲ့မှုတွေပါ။ တပ်မတော်ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူးလို့ခေါ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေရဲ့နေ့တဓူဝကိစ္စတွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးရတဲ့ ၇ာထူးကိုနှစ်ရှည်ကြာကိုင်ခဲ့သူသာမက မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလက်ရဲဇက်ရဲရှိလာသူမို့၊ သူ့ကိုစစ်သြဇာရှိတဲ့နေရာကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လများစွာကတည်းကဖယ်ရှားခဲ့ပြီး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌဆိုတဲ့ရာထူးနဲ့ ချွေးသိပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်သိန်းစိန်ဟာ ပြည်တွင်းသာမက၊ ပြည်ပမှာသာအတွေ့အကြုံရှိပေမဲ့၊ “ဟေ့ -မင်းဒီနေ့ရာထူးကထွက်ကွာ” လို့ပြောရင်၊ “ကျွန်တော်အဆင်သင့်ပါဘဲ” လို့ဖြေမဲ့သူမျိုးပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ထားရာနေစေရာသွားမဲ့လူတန်းစာမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့သူလဲလေ လောကီသားဘဲ။ အာဏာနဲ့ပါတ်သက်လာရင်ခံနိုင်ရေရှိသူရှားသားကလား။ ကိုယ်ဆရာသမားကို ကိုယ်ပြန်ဆော်တဲ့သာဓကတွေမြန်မာနိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာအများကြီးပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့လက်ရှိအာဏာတက်လာကြသူတွေနဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးတို့ကြားမှာ အပေးအယူတွေတော့ တော်တော်ကြီးရှိကြမယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။
ဒုသမ္မတတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းဆိုသူဟာ သူနေတဲ့လာရှိုးတ၀ိုက်မှာ ရှမ်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတည်တန်ူခိုင်မြဲရေး နဲ့ရောက်လာသမျှတိုင်းမှူးတွေနဲ့ဂေါက်ရိုက်ခြင်းအတွေ့အကြုံ ရှိတာကလွဲပြီး၊ နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သာဓကတွေကို၊ ခါးတောင်ကျိုက်ပြီးမီးထွန်းရှာရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ဒုသမ္မတရာထူးမှာ နိုင်ငံက”၀”တလုံးတောင်မသိဘူးမကြားဘူးတဲ့သူကိုပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်၊ နိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရေးအတွက် ရတက်မအေးစ၇ာဖြစ်သွားပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားထဲက တိမွေးကုဆ၇ာဝန်လုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင်ကတော့ လူနဲစုအတိုက်အခံတွေက၀ိုင်းတင်ကြပေမဲ့၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်ကြီးစိုးတဲ့အချက် တခုတည်းနဲ့ ဒုသမ္မတရာထူးနဲ့လွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလဲ လူတိုင်းကသိပြီးသား ကိစ္စကြီးပါ။
အရင် လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ)ခေတ် ကအရာရာကိုပါတီကဦးဆောင်တယ်လို့အခြေခံဥပဒေက တောင်ဆိုထားတဲ့အတွက်ရှင်းပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် သက်ဆိုင်ရာ ပါတီစိတ်ကော်မီတီ၊ ပါတီယူနစ်၊ ဒေသပါတီ၊ ပါတီဗဟိုကော်မီတီ အဆင့်ဆင့်က ဆန်ဆီစားကုန်။ထီးဖိနပ်ခွဲတမ်းကအစ၊ ပဒုမ္မာပြခန်းလို့ခေါ်တဲ့ရှားပါးကုန်ပစ္စည်းများကို အဆမတန်သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရတဲ့ အခွင့်အရေးရှိတဲ့ ပါတီနဲ့နိုင်ငံတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအတွက် ခွဲတမ်းစာရင်းကို ပါတီကိုအရင်တင်ပြီး ခွဲတမ်းအတည်ပြုရပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဘာအမိန့်ချချ၊ ပါတီဦးဆောင်မှုကိုခံယူတယ်ဆိုပြီးမှ အမိန့်အတည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီရုံးကိုလမ်းသလားနိုင်ကြသူတွေ၊ ဟန်ကျကြတဲ့ခေတ်ဆိုပါတော့။ စစ်တပ်ကတော့ ခွဲတမ်းစာရင်းရဲ့အရိုးအရင်းတွေကိုရကြစားကြရလို့ အဲ့ဒိကတည်းကမကျေနိုင်မချမ်းနိုင် ဖြစ်ကြတာ၊ အရေးအခင်းပြီးလို့ ဗိုလ်နေ၀င်းနိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံကလုံးဝအနားယူသွားချိန်မှာ၊ မဆလမကောင်းကြောင်း ပြောကြသူတွေထဲမှာခုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကအဆိုးဆုံးဘဲလို့ထင်ပါတယ်။ ကဲ- အခုစစ်တပ်နဲ့ အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဘယ်လိုစီးခြားမလဲ။ လက်ရှိစစ်တိုင်းမှူးတွေက တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ဥက္ကဌတွေမို့ သူတို့ရာထူးတွေကို အဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တွေဆီမကြာမှီလွဲကြရပါတော့မယ်။ အခွင့်အရေး နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အလုအယက်ဖြစ်ကြအုံးမှာမြင်ယောင်ပါတယ်။ လူထုသန်း (၆၀)ကတော့ မျက်စိနားသူငယ်နဲ့ အရိုးအရင်းတွေနဲ့သာဆက်ကျေနပ်ကြရအုံးမဲ့ပုံပါ။
ဗိုလ်သန်းရွှေ က ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်တစ်ဦးကိုရွေးရင်တော့အထူးသတိပြုရမှာက၊ သူ့ရဲ့နောင်ရေးစိတ်အေးလောက်နိုင်မဲ့သူ၊ သူမတန်တဆရရှိခဲ့တဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းချွေရံသင်းပင်းတွေ ကိုကာကွယ်ဘို့နဲ့၊ လူထုအပေါ်မတရားနိုင်းထက်စီးနင်းပြုမှုတွေ၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုတွေကို၊ သင်ပုန်းချေနိုင်မဲ့သူဖြစ်ဖို့သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အရေးအခင်းတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ အာဏာသိမ်းရာမှာလက်မနှေးကြဘို့ တလောစစ်အခမ်းအနားတခုမှာအငယ်တန်း စစ်ဗိုလ်မြှောက်ပင့်သွေးထိုးစကားတွေပြောခဲ့တာကိုကြည့်ရင်၊ အစီအမံတွေတတ်နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့တာကိုမြင်ရပါတယ်။ လက်ရှိအာဏာရလာကြသူတွေကြည့်ရင် အပြစ်ကင်းကြသူတွေမရှိပါဘူး။ ဘ၀တူတွေမို့ ကိုယ့် ကုလားထိုင်လှုပ်မယ့်အခြေရှိရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းနည်းက အတော်ခေတ်စားလာမဲ့ပုံပါဘဲ။ သူသာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရင်၊ ဒီလွှတ်တော်မှာ နောက်တက်တဲ့ သမ္မတကိုတရားဝင်အာဏာလွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ကလဲ၊ န၀တ တဖြစ်လဲ နအဖရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကိုချီးကျူးထောပနာပြုရင်း နအဖရဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှ (ပြည်သူတွေကိုသတ် ဖြတ်ညှင်းဆဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တာအပါအ၀င်) အားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံအတည်ပြုခြင်း၊ ကျေးဇူးကြီးလှပုံတွေကိုတခမ်းတနားဖေါ်ပြဘို့အဆင်သင့်ရှိပြီးသားပါ။ ဘယ်ပုံနဲ့ အာဏာလွဲမှာလဲ။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာဘယ်နည်းနဲ့ကုလားကာနောက်ကွယ်ကိုဝင်မှာလဲ။ အဲ့ဒါကတော့ စိတ်ဝင်စားစ၇ာပါဘဲ။ သေခြာတာကတော့ လူထုကသူ့ကို မေ့လောက်ရှိအောင် နိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာစာကနေ ပျောက်သွားအောင် သူဘယ်လိုဘဲကြိုးစားကြိုးစား၊ သူ့နောက်ကိုတော့ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ကြမဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒေးပါ။ ပြည်တွင်းသာမက၊ ပြည်ပမှာ ဒီလိုအတွေင်းရေးကိစ္စတွေကို အနံ့ခံကောင်းတဲ့ သူတွေ အများကြီးဆိုတာအထင်အရှားပါ။ ခုတလောပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Wikileak အပါအ၀င်တနေ့တခြားကျယ်ပြန့်လာတဲ့ media နဲ့ infotech တိုးတက်မှုတွေက သူ့ကိုမေ့သွားစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်နေ၀င်းသေသွားပေမဲ့ သူ့ရဲ့သမီးနဲ့သမက်မြေး များဟာ ခုချိန်ထိအာဏာမဲ့ခြင်းရဲ့ ဒုက္ခတွေကိုခါးဆီးခံနေရဆဲပါ။ ဒါတောင်သူတို့တတွေခံစားခဲ့တဲ့ စည်းစိမ်ဟာ ခုဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ စာလိုက်ရင်မယှဉ်နိုင်အောင်နဲပါသေးတယ်။
အတိုက်အခံအမတ်မင်းများဘက်ကြည့်ကြရအောင်။ လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီအမတ်တွေရဲ့ မဲဆွယ်ဟောပြောမှုတွေနောက် သံယောင်လိုက်ကြသူတွေထဲမှာ ပထမဆုံးဒုက္ခရောက်ကြသူတွေကတော့ မဲဆန္ဒရှင်တွေပါဘဲ။ ကြံ့ဖွံ့ကိုမဲထဲ့မိရင်တောင် လမ်းခင်းပေးသေးတယ်။ အခွင့်အရေးလေးရသေးတယ် လို့ဆိုတဲ့သူတွေကဆိုနေကြပါပြီ။ သူတို့ရွေးလိုက်တဲ့အမတ်မင်းများကတော့၊ လွှတ်တော်မှာဘာလုပ်မယ်၊ ဘာဆွေးနွေးမယ်၊စတဲ့အစီအစဉ်ဆိုတာဝေးရော၊ ဖိတ်စာတောင်ရရ မရရရ လာပါဆိုပြီးတာဝန်ကျေဖိတ်ကြားတာတွေခံနေရပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့အရွေးခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လွှတ်တော်ထဲကြွားကြွားဝါ၀ါနဲ့ပြောကြဆွေးနွေးကြ၊ ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာတည်းကြ လုပ်နေကြချိန်မှာ၊ အတိုက်အခံအမတ်မင်းများကတော့ အစိုးရကနေ့ချင်းပြီးဆောက်ပေးတဲ့အဆောင်တွေမှာေ၇မီးမပြည့်မစုံနဲ့ တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြရတဲ့အဖြစ်ပါ။ လွှတ်တော်ထဲကျရင်တင်မယ်လို့ လူကြားကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေကြမ်းတွေကို အချငိးချင်းဆွေးနွေးဘို့ဆိုတာဝေးစွ၊ ဘယ်လိုတင်သွင်းရမလဲဆိုတာတောင် နည်းလမ်းရှာမရဖြစ်နေကြရပါတယ်။ အများစုကတော့ခုချိန်မှာအစိုးရကချပေးလာမဲ့ တိုက်ခန်း၊ ကား၊ လိုင်စဉ်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ခွဲတမ်းစတဲ့ အခွင့်အလမ်းလေးများအတွက်စိတ်ကူးစယဉ်နေကြပြီဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။
လွှတ်တော်မှာကြံ့ဖွံ့ နဲ့ စစ်တပ်က (၈၀ %) ယူထားပြီးပြီမို့ ဘာဥပဒေလာလာ၊ ကြံ့ဖွံ့ကတင်တာဆိုရင်အလိုအလျောက်အနိုင်ထောက်ခံမဲရပြီးသားဆိုတာအများသိကြပြီးသားပါ။ ကျန်(၂၀%) ထဲမှာလဲစစ်တပ်နဲ့အလွမ်းသင့်ပြီးသားနဲ့ အလွမ်းမသင့်ရင်မဖြစ်ချေဘူးဆိုတာကို အဖြေးဖြေးသဘောပေါက်လာကြပြီးဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီများနဲ့အတိုက်အခံအချို့ကလဲ မထူးဇာတ်ခင်းဘို့လမ်းသာနေကြောင်းထင်ရှားလာပါတယ်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုလေ့လာကြည်ကြပါ။ စက်ရုပ်များနဲ့တူမနေဘူးလား။ ဒီလိုကြံ့ဖွံ့လူများစုလွှမ်းမိုးတဲ့ လွှတ်တော်ဖြစ်ရေးကိုလည်းဗိုလ်သန်းရွှေက သေသေခြာခြာအကွက်ရိုက်စီစဉ်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ ဘာလုပ်ချင်လုပ်ချင် ထောက်ခံမဲအသာစီးရရေးေ၇ရှည်စီမံကိန်းကအတော်ခရီးပေါက်မဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကြီးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလတုံးကလည်း ဘယ်ကမှန်းမသိတဖွဲဖွဲရောက်လာတဲ့ ကြိုတင်မဲစနစ် ဟာကြံ့ဖွံ့ ကိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရစေခဲ့တာအမှတ်ရကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အချုပ်ပြောရရင် စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ် ဆိုပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဝေဟာရကျမ်းမှာ ဘယ်မှာမှရှာလို့မရတဲ့ စကားလုံးနဲ့ နိုင်ငံကိုဆက်ပြီး စစ်ပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်သွားမဲ့အစီအစဉ်ကို စတင်အသက်သွင်းနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာစံနှူန်းမမှီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်မို့ သက်ဇိုးရှည်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲဆိုတာလဲပြောရခက်ပါတယ်။ တခုဆိုးတာက ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုခွင့်ပြုရုံမက အားပေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိတာကြောင့်၊ စစ်ဘိနပ်အောက်ကပြည်သူတွေဘယ်တော့လွတ်နိုင်ပါ့မလဲဆိုတာကိုရင်လေးစွာနဲ့စောင့်
မန္တလေးဂေဇက် အင်တာနက်စာမျက် နှာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: သတင်း ဆောင်းပါး, အတွေးအမြင်	← ယုဇန ပလာဇာ အလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲ
Exit Through The Gift Shop →
ဘီလူးရေ ငါရေးထားတဲ့စာတွေပျောက်ကုန်တယ်ဟ ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ ..
August 24, 2011	ah the	#
To Yaw ma (tourist)
Fuck your mother yourself. The doggy Than Shwe has already fucked your mother. Now it’s your turn. Bcoz your mother isaprost. Your sisters and wife will be fucked by doggy military government.
February 10, 2011	dream	#
tourist မင်းကိုမင်းသိပ်တော်တယ်သိပ်တတ်တယ်ထင်နေရင် နွားကို ကိုယ့်လီးကိုယ်ပြန်ထည့်နည်းသွားသင်ပေးလိုက်အုန်း (jokerဆိုသည့်နွား) tourist ပြည်သူတွေက ငပိန်းတွေမဟုတ်ဘူးကွ စာလုံးပေါင်းမှားနေလည်း သူတို့ဘာသာသူတို့ ပြင်ဖတ်တတ်တယ်က မင်းလို စာလုံးပေါင်းအတိုင်းလိုက်ဖတ်နေတဲ့ခွေးတွေမပါဘူးကွ။ မင်းတစ်ယောက်ထဲဘဲ ခွေးလိုဖတ်နေတာ ကိုယ်မေကိုလိုးရဲ့။
February 9, 2011	Ye` Htut	#
သူများကို ဝေဖန်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ပြည့်အောင် အရင်လုပ်ပါလားကွာ။ စာတတ်ကို (တ)နဲ့ ရေးရတာ။ စိုးတာ၊ စိုးရိမ်တာ (စ)သုံးရတယ်။ ကြိုးစားကို ရရစ် (ြ )သုံးရတယ်။ နိုင်ငံရေးအကြောင်း ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်ရှုထောင့် တစ်နေရာက ပါဝင်ရေးသားကြတဲ့ ဆိုက်ကွ မြန်မာစာ စိစစ်ရေးက တင်ထားတဲ့ ဆိုက် မဟုတ်ဘူး ခွေးသားရဲ့။ မင်းက ဆရာကြီးလား…
February 9, 2011	problem	#
ဟေ့ ကောင် ”ရောမ” မင်းကို ငါကြည့်နေတာကြာပြီ
မင်း မကျေနပ်ရင် ဒီဆိုဒ် ကို မင်းဝင်မဖတ်နဲ့ ပေါ့ကွ
February 9, 2011	ဘီလူး	#
အေးဘယ်သူဆဲဆဲ ပေါ့ မင်းက မင်းထောက်ပြချင် တာရှိ ရင် ထောက်ပြလေ လီးဖြစ်လို့အရင်က ကော့မန့် အဟောင်းကို ကော်ပီ
တွေ ပေ့စ် တွေ လုပ်နေလဲ ..လီး မြင် ရင် မင်းက ခရေဇီ ဖြစ်နေလို့ လား ..မင်းလို ကောင်မျိုး ဘယ်သတင်းက ဘယ်က စတိုင် ဘယ်
သူက ဘယ်လို ရေးဟန် တောင် မသိတောင်က က ဆရာ လုပ်ပြီး ရေးနေသေးတယ်။ မင်း အဲဒီလောက် သတ္တိ ရှိနေရင် သောကြာ
နေ့ ရေကျော် မောင်အေး ဆိုင် ကို ညနေ ငါးနာရီ လာခဲ့စမ်းကွာ
February 9, 2011	lay phyu	#
ကြိုက်တယ်ဘီလူး။ အဲဒီရောမဆိုကောင် တော်တော် စောက်ပြဿနာရှာတဲ့ကောင်။ ဆရာလိုလို ဘာလိုလို နဲ့။ သိပ်ဆရာကြီးလုပ်ချင်ရင် အခမဲ့ ဖင်ခံနည်း သင်တန်းဖွင့်ပါလားကွာ။ tourist တဲ့။ နိူင်ငံတကာလှည့်ပြီး ဖင်ခံစားနေတဲ့ကောင်နေမှာပေါ့။
ထပ်ပြောလိုက် အုံးမယ် ဆောက်ပတ် ကို စ လုံး နဲ့ပေါင်းတာ မင်းမိန်းမ စ လုံး ကို သွားပြီး ဖင်ခံတော့ မှ ပေါင်း FNG ရေ ကန်တော့ပါရဲ့ဒီလို အရိုင်းအစိုင်း ကောင် ရဲ့ ကော့မန့် ကို Approve မလုပ်ပါနဲ့ .
February 8, 2011	ရောမ tourist	#
February 2, 2011 at 1:34 am | #5
မင်းအမေ ဆောက်ပတ် ကို မင်းပြန်လိုးလိုက် ]
ဒါ ငါဆဲတာမဟုတ်ဘူးလေ မင်းတို့ တင်ထားတဲ့ comment ကို copy & paste လုပ်ပြီး ပြန်ပို့ လိုက်တာ။
ငါရေးတာ မင်းလိုရိုင်းတာတစ်ခုမှမပါဘူး။ [ဆောက်ပတ် ကို စ လုံး နဲ့ပေါင်းတာ မင်းမိန်းမ စ လုံး ကို သွားပြီး ဖင်ခံတော့ မှ ပေါင်း] ဒါက ဘီလူးဆိုတဲ့ အရိုင်းအစိုင်း ကောင် ရေးတာ။
February 9, 2011	ရောမ tourist	#
လုံးမချနဲ့လေ [ ကုလားကာ နောက်ကွယ်သို့ ဝင်ရောက်တော့မည့် …] ဆိုတဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်က မန္တလေးဂေဇက် ကရေးတာပဲလား။
FNG မှာ မျိုးမသန့် ပတ်ဝန်ကျင်ဆိုးက လာတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေ လွတ်လပ်စွာ ဆဲရေး တိုင်းထွာခွင့်တွေ ရနေတယ်။
FNG ကိုယ်စား ၀င်ပြောလိုက်အုံးမယ် မန္တလေးဂေဇက် ကနေ သူများ ဆိုက်က သူများ စာရေးဆရာ ရေးထားတာ ကို FNG ပရိသတ်
တွေ သိဖို့ ပြန်မျှဝေတာ ကို သူများ စာရေးဆရာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း ပဲ ရေးရတယ်။ မအေလိုး ရောမ တိုးရစ် ရဲ့ တခြား စာရေးဆရာ
က လီး လို့ ရေးထား တာ ကို မကောင်း ပါဘူး ဆောက်ပတ် လို့ ပဲ ပြင်ရေးလိုက်မယ် လို့ မရဘူး ။ ဂျာနယ်လစ် အက်သစ်လေး
ဘာလေးလေ့လာလိုက် အုံး ၊ရေး ကောင်းကောင်း နဲ့ လျှောက်ရေး မနေနဲ့ မင်းဖင် ထဲ လီးဝင် သွား အုံးမယ်
“ကုလားကာ” တဲ့ ပြောပြန်ရင်လဲ မျိုးရိုးမသန့် ပတ်ဝန်းကျင်ညံ့က လာတဲ့ကောင်တွေက ဆဲဦးမယ်။
ဒါ ငါဆဲတာမဟုတ်ဘူးနော် မင်းတို့တင်ထားတဲ့ comment ကို copy & paste လုပ်ပြီးမင်းတို့ဆီပြန်ပို့ လိုက်တာ။
ဆလိမ်နဲရေးတဲပေxာက်ပတ်ဆိုတာလည်း ခုမှတွေဖူးတယ်။ အဆဲပဲတပ်တယ် မြန်မာစာတော့မတပ်ဘူး။
ခပ်တုံးတုံးကောင်တွေ သဘောမပေါက်မှာဆိုးလို့ ပြောလိုက်မယ်၊ ငါကမရိုင်းဘူး ရောမရောက်လို့ ရောမလို (ကျိုးစားပြီး)ကျင့်ရတာ။
February 8, 2011	problem	#
ခွေးသူတောင်း စား သန်းရွှေ မင်းလည်း ”နေ၀င်း” နောက် လိုက်မဲ ကောင်ပါကွာ။ မင်းလုပ်ခဲ့ တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကို မင်းဥပဒေ နဲ့ ဖုံးကွယ်လို့ ရချင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းအရိပ် က မင်းနောက် ကို လိုက်လာမှာပဲ။ မင်းရဲ့ ချစ်လှ ပါကြီးရဲ့ခွေးသူတောင်းစားဖို့ လပြည့်ကို လည်း သနားပါတယ်ကွာ။ ဒီကောင် မင်းကြောင့် တစ်နေ့ ဒုက္ခ ရောက်မှာ သေချာတယ်ကွ့မင်းသိလား
February 8, 2011	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,727,375 hits